जब गुरु विश्वामित्रको अपमानपछि रामले चलाए हनुमानमाथि वाण
२०७६ माघ ६ सोमबार, विश्वामित्रले भने-मुनिराज ! यो मेरो होइन रामको गुरुको अपमान हो। राम जसो उचित सम्झन्छन् त्यसै गरुन । नारद त्यहाँबाट राम भएको ठाँउमा पुगे । नारदले रामसँग भने -महाराज! यस समारोहको आयोजन के तपाईले आफ्नो गुरु-अपमान को लागि गर्नुभएको हो ? रामले केहि सोध्नु अघि नारदले थपे -काशीका राजा स्वास्तिकले तपाईको गुरुको घोर अपमान गरे । गुरु अपमानको कुरा सुनेर, भगवान् रामको क्रोध बढ्यो र उहाँले नारद मुनिको अघि प्रतिज्ञा गर्दै भन्नुभयो -मुनिश्रेष्ठ! जसले मेरो गुरुको अनादर गरेको छ, उसले उचित फल पाउनेछ। भोली सूर्यास्त हुनुभन्दा पहिले मेरो तीक्ष्ण बाणले स्वास्तिकको सिरलाई शरीरबाट अलग गर्नेछ । ... बाँकी अंश»
दक्षिण एसियामा नेपाली समाज : पहिले सबैभन्दा खुला, अहिले सबैभन्दा बन्द !
२०७६ माघ ६ सोमबार, दुइवर्ष अघिसम्म यो शीर्षकमा उल्लेख भएजस्तो वा उल्लेख गर्नु परेको जस्तो थिएन नेपाली समाज । जताततै पूर्ण स्वतन्त्रताको अनुभूति थियो । राज्यले आफनो समाज र आफैमाथि न्याय, अन्याय के गरेको हो, त्यसको प्रतिकृया दिन्थे आफनो भाषामा र आफुसंग उपलव्ध माध्यमबाट । ... बाँकी अंश»
पुटिनको योजनाको अर्थ...
२०७६ माघ ५ आइतबार, काठमाडौं। रुसमा अहिले चरम राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा छ। बुधबार रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संविधामा महत्वपूर्ण केही सुधारको योजनाको घोषणा गरे। यससँगै रुसमा सरकारले राजीनामाको तयारी गरेको छ। ... बाँकी अंश»
राजस्व छल्ने साना ठूला कसैलाई छाडिन्न: महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली
२०७६ माघ ४ शनिबार, अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइयो । विभागलाई कानूनी तथा साङ्गठानिकरुपमा समेत थप सवल बनाइयो । जसका कारण पछिल्ले पटक डेढ वर्षका अवधिमा रु १५ अर्ब कर छली गरेको अभियोगमा ५०६ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग रसस का रमेश लम्साल र नारायण ढुंगानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश। ... बाँकी अंश»